Shirkado Kenyaati ah oo shaqo joojin ku sameeyey Kumanaan Qof. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shirkado Kenyaati ah oo shaqo joojin ku sameeyey Kumanaan Qof.
On Aug 26, 2019 391 0
Kenya waxay miizaaniyada ugu badan ku bixisaa milliteriga, iyadoo dayacday mu’assasaatkii dadweynaha.
Qoysas badan oo Kenyaati ah ayaa waxaa lasoo gudboonaatay xaalad cakirnaan ah oo dhanka nolosha ah, kadib markii ay shaqooyinkooda waaweyn dadkii biili jiray.
Shirkado waaweyn oo ku yaala wadanka Kenya, kana howlgalayeen kumanaan shaqaale ah ayaa ku dhaqaaqay tallaabo ay isaga dhimayaan shaqaalaha, taas oo ay howlahooda ku waayeen dad aad u badan oo Kenyaati ah.
Shirkadaha shaqaalahooda yareeyey, ayaa ah shirakdo waaweyn oo caan ka ah Kenya, waxayna isuga jiraan bankiyo, shirkado ka shaqeeya arimaha dhismooyinka, iyo xitaa khamriga.
Tan iyo bishii lasoo dhaafay, ugu yaraan lix shirkadood oo waaweyn ayaa shaqo joojin iyo eryin ku sameeyey dad cadadooda lagu qiyaasay 2000 oo ruux, taasina waxay mugdi gelisay nolosha dad badan oo Kenyaati ah.
Labadii todobaad ee ugu dambeysay, shirkadda Smant Portland oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn Kenya, iyo shirkadda isgaarsiinta Telecom ayaa eryay shaqaale badan, iyagooo ku doodaya inaaney bixin Karin mushaaraadkooda.
Siyaasiyiinta iyo Aqoonyahannada ka faallooda arimaha dhaqaalaha waxay sheegayaan in tani ay tahay culees horleh oo kusoo kordhay dowladda Kenya, loogana fadhiyo iney maareyso kumanaanka muwaadiniinteeda katirsan ee baahidu heyso.
Shirkadahan dhimay shaqaalahooda, waxay kor u qaadeysaa tirada dadka baaga muundada ee ah kunool wadankan Afrikaanka ah, ee uu musuq maasuqu ragaadiyay, waxaana hubaal ah in dowladda Kenya aaney maareyn Karin arintan, sidaasina waxaa qaba dad badan.
Sida ay sheegayaan diraasaadka sanadla ah ee looga hadlo arimaha dhaqaalaha Africa, wadanka Kenya wuxuu kaalmaha hore kaga jiraa wadamada ugu masuq maasuqa badan aduunka.
Musuq maasuqa wuxuu gaaray hay’adaha ugu sarreeya dowladda, xitaa kama badbaadin Uhuru Kenyata, madaxweynaha wadanka Kenya, kaas oo la ogaaday in dadkiisu ay kalsooonida kala laabteen.
Mid kamid ah asbaabaha hoos u dhigay dhaqaalaha Kenya, dadkoodana baahida ku sababay waa duulaanka gardarada ah ee Kenyaatigu ku joogaan qeybo kamid ah gobollada Soomaaliya.
Miizaaniyadda ugu badan ee dowladda waxay ku baxdaa ciidanka, taasina waxay keentay in la ihmaaliyo mu’assasaaad badan oo muhiim u ahaa dadweynaha, sida wasaaradaha caafimaadka, shaqadaha iyo kuwa kale.
Siyaasiyiin badan oo Kenyaati ah ayaa horay u codsaday in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya, oo ay sheegeen inuu yahay duulaan aan waxba laga dheefin, dhib iyo dhaqaale darro mooye.
Sawirro: Isku Imaatin Farxadeed Oo Lagu Sagootinayay Ciida.